News/Wara Archives - Land Of Punt
Category - News/Wara
Dagaalkii koobad iyo kii labaad ee dunidu kuhoobatay udhaceen siiba waxbadan ayaa caalamka iska badalay. Kooxda majaraha caalamka uhaysa ee saldhigodu yahay wadamada horumarka casrigaa gaadhay ayaa intaan labadan dagaal dhicin...
Dunida aynu ku noolahay waxa ay u qaabaysantay hab aad u cajab badan. Waa mid ay loolan iyo iska hor-imaad ka dhaxeeyo cid kastoo daris ah, iyagoo ku loolama ama isku haya caqiido diimeed, ama mid dhuleed oo deegaan ku...
Magacayada maalmaha dalalka reer galbeedka waxay ku salaysanyihiin meerayasha iyo magacyo ilaayo (asnaab) laga caabudijiray qarniyadii hore wadamada galbeedka xiga. Magacyada todobada maalmood ee usbuuca kujira waxay ku saleeyen...
Waxaan safar gaaban ku imid magaalada London, anigoo u socdo ka qaybgalka xaflad aroos oo ehelkayga ah. Saddex cisho markaan joogay ayuu ila soo hadlay nin ka tirsan urrur ka mid ah kuwa sida qarsoon u shaqeeya. Wuxuu igu...
CADCEEDA OO LAGA RAJOQABO INAY DISHO COVIG-19
Natiijooyin hordhac ah oo kasoo baxaya Shaybaadho dawladeed oo tijaabo lagu sameeyay ayaa muujinaya in aan cudurka Coronavirus aanu ku badbaadi Karin ama ku noolan karin in mudo ah meel uu heer kul- keedu sareeyo oo huur ah...
“Digital Certificate” & “COVID-19”
Digital Certificate, waa nadaam cusub oo ay alifeen shirkado gaar loo leeyahay wuxuuna badalayaa nidaamka looyaqaan “ID Card” ee dunida laga isticmaalo. Waxa uu noqondoona kayd ka duwan kuwii hore; wixii macluumad shakhsi ah...